Joel Coen iyo Frances McDormand waxay dacweynayaan deriskooda Marin - dadka - WAA KU SAMEEYAAN
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Joel Coen iyo Frances McDormand waxay eryayaan deriska Marin - waa dad
Joel Coen iyo Frances McDormand waxay iibsadeen gurigooda oo ku yaal Bolinas si ay nabad ugu noqdaan. Hadda waxay noqotay aag dagaal oo sharci ah.
Coen, oo ah agaasime abaalmarin la gudoonsiiyey Academy, iyo McDormand, oo ah Aktarad ku guuleysata Akademiyada Abaalmarinta, ayaa dacaayadeysa deriskooda si ay uga doodaan xariiqda guryaha.
Lammaanaha ayaa sheeganaya milkiilayaasha. Randolph Rush, dhakhtarka ilkaha ka fariistay, iyo xaaskiisa Donna, sawir-qaade, waxay iska indhatirayaan soohdin taariikhi ah oo dhex-galaya dhulkooda.
Rushes waxay guryahooda ku leeyihiin Bolinas ilaa sanadihii 45, ayuu yiri qareenkooda, Edmond McGill. Wuxuu intaas raaciyay in Coen iyo McDormand ay naftooda gaysteen "afgembi ula kac ah".
"Randy iyo Donna waxay ka gaabsadeen inay qaadaan tallaabo sharci ah sida Coen iyo McDormond sababtoo ah waxay rabeen inay ku sii raaxeystaan ​​gurigooda si deggan iyagoo aan dagaal badan ka dhicin maxkamadda." McGill ayaa yidhi. "Waxay aad uga xun yihiin in Coen iyo McDormand ay dacwad gudbiyeen."
Coen iyo McDormand waxay iibsadeen hantida Bolinas ee 2005, sida ku xusan dacwadda. Gabadha qareenka ah ee Michelle Catapang, ayaa sheegtay in "dhaqanka fudud ee Bolinas" iyo meelaha banaan ee ku xeeran ay ka dhigtay "helitaankii ugu fiicnaa"
. Cagaar cagaaran ayaa hantidooda ka go'ay kan Rush. Coen iyo McDormand ayaa sheegaya in cagaarka cagaaran marwalba loo aqoonsan yahay inuu qayb ka yahay hantida ay iibsadeen. Sidaas darteed, dacwoodayaashu waxay sheegteen inay aqbaleen masuuliyada muuqaalka dhirta iyo dayactirka, faa iidada ugu jirta labada dhinac.
2007, Rushes waxay heshay sahan ku meeleeyay soohdinta hantida ee xNUMX cagaha woqooyi ee loo yaqaan soohdinta taariikhiga ah. Marka loo eego xeer ilaalinta, qaabeyntaan waxay abuurtay cagaar cagaaran hantida Rush iyo qeyb ka mid ah Coen / McDormand alley.
Intaa waxa u dheer, tani waxay u abuurtay dhibaato sharciyeed suurtagal Coen iyo McDormand sababta oo ah garaashkooda wuxuu ku dhex yaal dib-u-dhacyo loo baahnaa.
Baadhitaanku ma uusan keenin khilaaf sharci ah oo degdeg ah oo ka dhexeeya lammaanaha iyo Coen iyo McDormand waxay muujiyeen inay sii wadeen mas'uuliyadda Greenbelt. Seddex sano ka hor, si kastaba ha ahaatee, Rushesku waxay sheegteen lahaansho iyo inay gacanta ku hayaan Greenbelt, ayay tiri dacwaddu
. Coen iyo McDormand waxay heleen sahan u gaar ah oo xaqiijinaya khadka hantida taariikhiga ah ee la sheegay. Lamaanayaashu waxay ku heshiiyeen inay kaqaybqaataan dhexdhexaadinta waxayna ku gaareen heshiis mabda 'ahaan bishii Maajo 2018. Khadkan cusub ayaa siiyay Rushes wax badan oo cagaaran, ayuu yiri dacwadu.
Laakiin Rushes wuxuu bilaabay inuu horumariyo oo uu waraabiyo Greenbelt-ka isagoo aan waligiis dhameyn heshiiska, dacwoodayaasha ayaa sheeganaya. Waxay sheeganayaan in Rushes ay sii wadeen diidmo cusub, sida meesha uu ku yaallo taangiga propane hantida Coen / McDormand, waxayna diideen inay diiwaangeliyaan heshiiska ugu dambeeya.
Bishii Juun, Coen iyo McDormand waxay email u direen Rushes, iyagoo ku boorriyay inay: saxeexaan dukumiintiyadii dejinta ee ugu dambeysay ee ay diyaariyeen.
Farriinta, oo ay ku kala saxeexan yihiin "Joel iyo Fran", "Waan ixtiraamnay heshiiska, dhinac walba, sanadki ina dhaafay, waxaanuna xallinnay wixii walaac ah oo dhan." waxaan sii wadi karnaa sii wadida xiriirka saaxiibtinimo sidii deris ahaan sanado badan. Heshiiskeena wuxuu shaqeynayay in kabadan hal sano isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan aan u dhameystirno, sida ugu dhaqsaha badan murankaani gadaal ayuu inaga qaban doonaa. "
Rushes-ka ayaa sii waday diidmadooda. Oktoobar 28, Coen iyo McDormand waxay dacwad ka gudbiyeen maxkamadda sare ee degmada Marin County.
Kiisku wuxuu weydiisanayaa maxkamada inay xoojiso sharciga ama ay aqoonsato xadka taariikhiga ah. Haddii kale, xeer ilaalintu waxay raadineysaa xukun oggolaanaya Coen iyo McDormand lahaanshaha Greenbelt.
Lammaanaha ayaa waliba weydiisanaya qarashka dacwada
Dacwada waxaa loo aaneeyey Garsoore James Chou. Shirka maaraynta kiiska ugu horeeya waxaa loo asteeyey Maarso 19.
Burida / PCA-ga hore ee la yaabay isagoo qaawan goor dambe oo habeenkii ah wuxuu sameynayay waxyaabo dhiirigelin ah
Dadka intooda ugu badan, 23 $ stylus wuxuu u fiican yahay sida 100 $ - BGR Apple Pencil
Yann-Arthus Bertrand: muuqaalka cagaaran